Zodiac: Orcanon Odyssey iyo RPG inonwa kubva kuFinal Fantasy | IPhone nhau
Vashandisi vanga vakamirira kwenguva yakareba zvakadii kuyeuka nekudzokorodza kweFinal Fantasy yeIOS, zvisinei, hazvisi zvese zvinofanirwa kunge zvichibika zvakafanana, uye vakomana veKobojo vazviziva izvo, studio yatinogona kuwana Kazushige Nojima, munyori we Yekupedzisira Kufungidzira, saka isu tinogona kuti kubudirira kunovimbiswa. Isu tinonyevera kuti hatisi kutarisana nemutambo wakasarudzika, kure nawo isu tiri pamusoro pezvose nyika yakarongedzwa uye uye isu kuti tipinde mairi, apo zvese zvese zvine chikonzero uye panenge pasina kana chinhu chisina kugadzirwa nechinangwa, saka patinenge tichitamba tinofanira kuisa pfungwa dzese pachiratidziro cheIpad yedu kana tisingade kupedzisa kuruma guruva pamberi pevakwikwidzi vazhinji vatichasangana munhoroondo yese. Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve Zodiac: Orcanon Odyssey? Mune iPad Nhau tinokuudza iwe zvese zvakadzama zveichi chikamu chemutambo.
1 Mhemberero, inotipei?
2 Chimiro chemutambo
3 Graphics uye rwiyo
4 Iyo nyaya iri kuseri kwebasa rakawandisa
Ichi ndicho chikamu chekutanga chezvivimbiso zvekuve saga, saga inonzi Zodiac, mutambo wevhidhiyo uyo usingawanikwe kune wese munhu, uye hatisi kutaura pamusoro pemutengo kana tichitaura izvi, ndechekuti inyanzvi yechokwadi ye iyo JRPG yemafoni isina kumboonekwa kare, ine cast iyo yakawanda inonyaradza blockbusters vanga vatozvida ivo, kubva paruoko rwaKazushige Nojima, munyori weFinal Fantasy; Hitoshi Sakimoto anouyawo achibva ku Square saka ane ruzivo mu Final Fantasy saga, pamusoro pekuve muKonami uye pakupedzisira mumwe mubairo weFinal Fantasy, uye ndiye Hideo Miaba, director director yevakawanda Yekupedzisira Kufungidzira kwave kuriwo chikamu cheichi chinoshamisa chirongwa. Kana iwe uine kusahadzika pamusoro pezvaunowana paunenge uchitamba.
JRPG inovavarira kupa iyo -kutenderera-kurwisa kumwe kufamba. Nekufamba uye kuteedzana zvakanyanya senge Yekupedzisira Yekufungidzira VII, tinozviwana isu tiine kutendeuka-kwakavakirwa kurwisa mune dzakawanda zviitiko zvine kuwanda kwevavengi neshamwari. Iwo mafambiro achaitwa mune yakabudirira 2D simulation, kunyange isu tichiona kuti ichokwadi 3D panorama iyo yatinogona kudyidzana nayo muzviitiko zvakawanda. Nekudaro, ndakaona kuti kufamba kwakatsetseka pamepu kunogona kudzokororwa pazviitiko zvakawanda.
Mukugadzira mune ino kesi ishoma, kunyangwe iripo. Nekudaro, kutarisisa kune zvakadzama kwakanyanya kukosha, chero kuvandudzwa kwesimba remuvengi kunogona kutiita kuti tikunde kurwa kana tisingazive mabatanidzirwo chaiwo ekurwiswa panguva yakakodzera. Uye zvakare, ine yakasarudzika system, saka kurwisa kwedu senge kwevavengi kunogona kusabudirira pazviitiko zvakawanda, kuputsa zvachose zvirongwa zvedu pakati pehondo. Neichi chikonzero, shanduko yevatambi nenzira yakaenzana mukuenderana nezvinodiwa zvenguva yega yega yemutambo yakakosha kukosha. Isu tinorangarira kuti takawana anopfuura mazana maviri ezvombo zvakasiyana, ese anogona kukwidziridzwa.
Graphics uye rwiyo
Zvingave zvine hushingi kana ndikashinga kutsoropodza hunyanzvi hutungamiriri Hideo Miaba. Iyo mepu ye2D inogona kuve inosemesa, kunyangwe iyo mifananidzo yemabhodhi enhau, ine yakatarwa manga matauriro uye kwavo kwakajairika mafambiro ekufamba kusvika kunguva apo kugadzira komputa kwaive kusiko, kunoongwa. Vanozvipa kubata kwevechidiki asi izvo pasina mubvunzo zvichaita kuti vanyengeri vemitambo yekutamba vaine chiitiko chakajeka kuseri kwayo. Aya maratidziro anoitika mukati memutambo wese mune iyo nyaya, ichiperekedza nguva dzenharo dzakagadzirwa neakawanda hondo.
Ruzha rwacho rwakajairika, nenziyo dzakasununguka uye dzeacoustic yemifananidzo yakajeka asi izvo hazvizeze kuita kuti nzeve dzedu dedere kudhinda mhirizhonga inodiwa yehondo, Hitoshi Sakimoto anoziva maitiro ekuita izvi chaizvo uye akazviratidza mune yega yega edition yeyekupedzisira Yekufungidzira saga, saka haana kurasikirwa nemukana wekuenderera mberi achizviratidza panguva yesaga yeZodiac inotanga neiyi Orcan Odyssey.
Iyo nyaya iri kuseri kwebasa rakawandisa
IGN haina kuzeza kupa uyu mutambo mamaki e7.3, kunyangwe pasina chinangwa chekukakavadzana nevanoziva zvemitambo yemavhidhiyo, ndinofanira kutaura kuti vanovavarira kushatisa kukura kwemasikirini, kunwiwa kwebhatiri uye nguva yemutambo wevhidhiyo. , Iwo maviri ekutanga mapoinzi ari pachena uye yekupedzisira pamwe isingabvunzwe, nekuti izvo zvaunotarisira zvirinani maawa gumi ekutamba sezvo mutengo uri mapfumbamwe euros muApple App.
Iwo mutambo wekare-wekutamba mutambo, uchitipa mukana wekujekesa nezveramangwana redu, nekuti pazviitiko zvakawanda tichava nemikana yakasiyana yekupindura kumamiriro uye nhaurirano dzinoitika kwatiri munhoroondo yese. Izvo zvese zvinotanga apo Cael, protagonist uye musoja, paanopihwa kwake kwese patrol. Ndipo paanotyora unozove mumwe wemitemo mikuru yehumambo, achibata imwe yeanoyera "Shards". Tinopedzisira tave mujeri pasina chikonzero chiri pachena asi zvese zvinotapudzwa pakapinda vavengi vakaipa mupenitential nechinangwa chekusunungura mutungamiri wavo, ndipo patinorwazve. Kana mutungamiri wevavengi asunungurwa nyaya inotangaZvakare chinangwa chedu ndechekusunungura vanhu.
Munhoroondo yese tichaita shamwari dzakawanda sevavengi, chinhu chakanaka pamusoro peshamwari ndechekuti vachatiperekedza parwendo rwakaoma urwu, rwatichazotenda, sezvo vachatibatsira mukurwa. Pamusoro pazvose, shamwari yedu yakatendeka, iyo "imbwa ine mapapiro" inotitakura kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe uye ndiani angatipe hupenyu hwake, kurwisa kwake kwepasipo mumhando yepamusoro yekukumbira kuchatiburitsa munhamo inopfuura imwechete.
Isu tinonyevera kuti ndeyechokwadi JRPG ine mavara ese, hausi mutambo wako kana iwe wakanyudzwa munyika isina kujairika kana usina nguva yekuzvipira kumitambo yemavhidhiyo, zvikasadaro inogona kuva yakareba zvakanyanya. Kana iwe uri mudiwa weFinal Fantasy saga, uchishaya iyi Zodiac: Orcanon Odyssey chitadzo. Unogona kuiwana muchimiro
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Zodiac: Orcanon Odyssey iyo RPG inonwa kubva kuFinal Fantasy
New Apple Campus vhidhiyo inoratidza yepasi pevhu horo